गृहजिल्ला जाँदै गरेका खेलकुद मन्त्री तामाङलाई बाटैमा आइलाग्यो यस्तो संकट, केछ अवस्था ? — Sanchar Kendra
काठमाडौँ । गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोक हिँडेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई बाटोमै तनाव आइलागेको छ । कार्यकर्ता भेलाको सम्बोधनका लागि भन्दै गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोक जाँदै गरेका मन्त्री तामाङलाई इन्द्रावती गाउँपालिका ४ टाकुरेमा स्थानीयले बीच बाटोमै रूख ढालेर मेलम्चीबाट प्रवेश गर्नमा रोक लगाइएको छ।
बाटोमा अवरोध भएपछि मन्त्री तामाङ ४ घण्टादेखि मेलम्ची बजारमै रोकिएका छन्। मन्त्री तामाङ इन्द्रावती गाउँपालिका ५ स्थित ऐँसेलुखर्क कार्यकर्ता भेलामा सहभागी हुन हिँडेका हुन्।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अनौपचारिक विभाजन भइसकेपछि मन्त्री तामाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कित्तामा पुगेका छन्। उनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल निकटका हुन्। सिन्धुपाल्चोकमा नेकपा अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको पकड छ।
यता नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीको गलत प्रवृत्तिलाई तह लगाउन नसकेकामा आत्मालोचना गरेका छन् । आफ्नो समूहले काठमाडौंमा गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले वाम गठबन्धनको घोषणाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।
यद्यपि आफूहरुले घोषणापत्रमा भने जस्तो गर्न प्रयास भने गरेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री पदका लागि जे पनि सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने ओली प्रवृत्ति रहेको भन्दे उनले भने, ‘केपी ओलीलाई तह लगाउन सकेनौं । यसमा हाम्रो पनि कमजोरी रह्यो ।’
उनले अघि भने, केपी ओलीलाई मात्र दोष दिएर हामी चोखैं हुन्छौं भन्ने लागेको छैन । अब केपी प्रवृत्ति प्रति उदार भएर भित्रभित्र संघर्ष गर्ने र उनको प्रवृत्तिलाई काम गर्न दिने भुल गर्ने छैनौं । त्यसो गरेर फाइदा हुने रहेछ ।’ उनले आफूहरु राष्ट्रप्रति इमान्दार रहेको र अब पनि रहने दावी गरे ।
अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीमाथि कटाक्ष गर्दै भने– फट्याइँ गर्न पनि कति सकेको क्या ! जालझेल गर्न पनि कस्तो दिमाग हो !’ विशेष गरी जनयुद्धका योद्धाहरुलाई प्रचण्डले बेवास्ता गरेको केपी ओलीले आरोप लगाउँदै आएका थिए, यसैको जवाफमा प्रचण्डले ओलीलाई ‘फटाहा’ को संज्ञा दिएका हुन् ।
केपी ओलीले सुरुदेखि नै जनयुद्धलाई विरोध गर्दै आएको बताउँदै प्रचण्डले भने, ‘जनयुद्ध भनेपछि सुन्न पनि नचाहने एक नम्बर मान्छे उहाँ हुनुहुन्थ्यो पहिला । पछि शान्ति सम्झौता भएपछि त अलिकति मान्नुहोला कि भन्ने ठानेको त जनयुद्धका शहीदलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा उहाँ एकचोटि पनि जानुभएन । मैले त्यसलाई खुब नोट गरेको थिएँ ।’
प्रधानमन्त्री बनेको यतिका वर्षसम्म ओलीले घाइते र योद्धाका समस्याको सुनुवाइ नगरेको प्रचण्डको गुनासो छ । उनले भने, ‘घाइते अपाङ्गहरु माइतीघर मण्डलामा अनशन बस्दा अनेक गरेर, ऋण सापट खोजेर मैले बेलाबेलामा राहत दिएँ । सरकारलाई मैले पटक–पटक यी घाइते अपाङ्गको उपचार हुनुपर्‍यो भनें । पहिला खाईपाई आएको मासिक भत्ता पनि खोसिदिएछ यो सरकारले त झन् ।’
प्रचण्डले अगाडि भने, ‘गृहप्रशासन पनि केपीले जे भन्यो त्यही मान्ने छ । मैले धेरैचोटि भन्दा कहीँ कतै टेरपुच्छर लाइएन । उल्टो मासिक भत्ता खोसियो । घाइतेहरुको उपचार गर्ने कुरालाई पूरै बेवास्ता गरियो ।’
तर, अहिले प्रचण्डले घाइते योद्धाहरुलाई नहेरेको भन्दै ओलीले फट्याइँ गरेको प्रचण्डको आरोप छ । उनले ओलीमाथि कटाक्ष गर्दै भने, ‘अहिले पार्टी विभाजन गरेपछि र आफू अल्पमतमा परेपछि मैले कहिलेकाहीँ सुन्छु, यी घाइते अपाङ्गलाई हेर्नुपर्दैन ? भन्ने यही केपी ओली ! फट्याइँ गर्न पनि कति सकेको क्या ! जालझेल गर्न पनि कस्तो दिमाग हो ?’
प्रचण्डले ओलीमाथि कटाक्ष गर्दै थपे– ‘कालीबहादुर खाम खोई अरे ! त्यो कालीबहादुर खाम विचरा आफैंले केही गर्‍या त होइन । उसको मुद्दा ठीक ढंगले हल होस् भन्नका लागि १०/११ वर्षदेखि म लगातार लागेको छु । उसलाई परेको गाह्रो–साह्रो हेर्न मैले लगातार बल गरेको छु । अहिले त कालीबहादुर, तपाईंलाई प्रचण्डले हेर्दैन ! जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर हुन् उनी ।
जसलाई मैले १० वर्षसम्म स्कुलिङ गरेर, हुर्काएर, माया गरेर एउटा ठाउँमा पुर्‍याएको । ती मान्छेको चाहिँ अब केपीले संरक्षण गर्ने रे ! आमाको दूध चुसेर भएन, बाबुको घुँडो ! योभन्दा लाजमर्दो अरु हुन्छ ? प्रचण्डले जनमुक्ति सेना नहेर्ने रे, केपीले !’
जनमुक्ति सेनाका सबै कमाण्डर, घाइते, योद्धा साथीहरु भ्रमित नहुनुहोला । तपाईंहरुको रगत पसिना र बलिदानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन ऐतिहासिक भूमिका खेलेको छ । इतिहासको स्वर्णिम अक्षरमा तपाईहरुको नाम लेखिइसकेको छ । त्यसलाई कालो पोत्ने काम हामी कोही नगरौं । म यो अपील गर्न चाहन्छु ।